Tambajotran’i Kaokazy: Bilaogera Ao Grozny, Ali Suleymanov · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2013 2:20 GMT
28 taona i Ali Suleymanov, “Archidesigner“[mpahay maritrano sy mpanaingo trano] teraka tao Tsetsenia, nandany ny fahatanorany tao amin'ny faritr'i Moskoa izy, nandia fianarana tao ary niasa toy ny mpanaingo tokontany. Niaina ny hafangainam-pandehan'ny fiainana an-tanàndehibe tao Moskoa izy, nanatrika fampiratiana, hetsika ara-kolontsaina, ary nandehandeha an-tongotra sy niampita sambo fandehanan'ny maro tao an-tanàna. Raha niverina tao Grozny i Suleymanov, dia nahita fomba fiaina samihafa tanteraka izay tsy mitovy tamin'ny fahazarany tao Moskoa. Somary tambanivohitra ny fiainana ao Grozny raha atao ny fampitahana, ary nonina manodidina ny tanàndehibe i Suleymanov, ka ataony toy ny kilalao ny diany isan'andro tamin'ny fandehanana fiara iombonana mitondra azy nivezivezy nitsangatsangana manerana an'i Moskoa. Tamin'ny fikasany faharoa hipetraka tao Tsetsenia (niverina tao Moskoa izy herintaona taorian'ny nanandramany hipetraka tany), nanomboka nanao bilaogy izy mba handrakitra an-tantara izay zavatra hitany tany Grozny sy handahatra ireo antenainy ho hitany indray andro any ao an-tanàna. Manana feo mivatambatana saingy manome mampafantatra zavatra maro ny bilaoginy amin'ny teny rosiana.